GỤỌ NKE Albanian Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe French Ga German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Serbian Setswana Shona Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Ukrainian Urdu Zulu
“AGAWO m nzụkọ ndị Kraịst ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ, ọ na-atọkwa m ụtọ ịgwa ndị ọzọ banyere Alaeze Chineke,” ka Miguel, onye bụ́ otu n’ime Ndịàmà Jehova ugbu a nke nọ n’Ebe Ndịda America, na-ekwu. “E mesịa, amalitere m ige usoro ihe omume okpukpe ndị a na-eme na redio ma na-ekiri ndị ụkọchukwu okpukpe na telivishọn. Echere m na usoro ihe omume ndị dị otú ahụ pụrụ inyere m aka ịghọta ndị na-ekpe okpukpe ọzọ n’ụzọ ka mma. Achọpụtara m na ozizi ha ekwekọghị na Bible, ma enwere m ọchịchọ ịmatakwu.”
N’otu ala ahụ, Jorge nọ na-anụ ọkụ n’obi n’ịkụziri ndị ọzọ banyere ezi ofufe. Ma, n’otu oge, ya onwe ya kwa malitere ige usoro ihe omume okpukpe ndị a na-eme na redio nakwa na telivishọn. “Ọ dị gị mkpa ịmata ihe ndị ọzọ na-eche,” ka ọ na-ekwubu. Mgbe a jụrụ ya banyere ihe ize ndụ a pụrụ inweta site n’ikpughepụ onwe ya nye ozizi ụgha n’ụzọ dị otú ahụ, ọ na-aza, sị: “Ọ dịghị ihe pụrụ imebi okwukwe nke onye maara eziokwu Bible.” Ahụmahụ ndị a na-ewelite otu ajụjụ dị mkpa, Ọ̀ bụ ihe amamihe ige ntị n’ihe ndị ọzọ kweere?
Ịmata Ezi Iso Ụzọ Kraịst
Mgbe ndị ozi nwụsịrị, e ji ọtụtụ ụdị Iso Ụzọ Kraịst adịgboroja bụ́ ndị ji nke nta nke nta pụta, merụọ ezi ofufe. Mgbe Jisọs bu ụzọ hụ nke a, o kpughere otu ụzọ isi mata ọdịiche dị n’etiti ụdị Iso Ụzọ Kraịst adịgboroja a na ezi Iso Ụzọ Kraịst. Nke mbụ, ọ dọrọ aka ná ntị, sị: “Na-ezenụ ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu n’ihe oyiyi atụrụ, ma n’ime ha bụ agụ na-apụnara atụrụ.” Ọ gbakwụnyeziri, sị: “Unu ga-esite ná mkpụrụ ha mazuo ha.” (Matiu 7:15-23) Ezi ụmụazụ Jisọs na-eme ihe ọ kụziri, a na-ejikwa ezi mkpụrụ ha amata ha n’ụzọ dị mfe. Dị nnọọ ka Jisọs n’onwe ya mere, ha na-eleta ndị mmadụ iji kọwaara ha banyere Alaeze Chineke site n’Akwụkwọ Nsọ. N’ịgbaso ihe nlereanya Jisọs, ha na-anọpụ iche na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na esemokwu ọha na eze ndị a na-enwe n’ụwa. Ha na-anakwere Bible dị ka Okwu Chineke ma na-akwanyere ya ùgwù dị ka eziokwu ahụ. Ha na-eme ka a mara aha Chineke. Ebe ọ bụkwa na ha na-agbalịsi ike igosipụta ịhụnanya ahụ Chineke na-akụzi, ha adịghị ekere òkè n’agha. Kama nke ahụ, ha na-emeso ibe ha ihe dị ka ụmụnna.—Luk 4:43; 10:1-9; Jọn 13:34, 35; 17:16, 17, 26.
Dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, o kwere omume ‘ịhụ ihe dị iche n’etiti onye ezi omume na onye na-emebi iwu, n’etiti onye na-efe Chineke na onye na-adịghị efe Ya.’ (Malakaị 3:18) Ndị na-efe ezi ofufe taa dị n’otu n’echiche nakwa n’omume, dị nnọọ ka ndị Kraịst narị afọ mbụ dị. (Ndị Efesọs 4:4-6) Ozugbo ị matara ìgwè nke ezi ndị Kraịst dị otú ahụ, gịnị mere ị ga-eji na-enwe mmasị ma ọ bụ ọchịchọ ịmata ihe ndị ọzọ kweere?
Kpachara Anya Maka Ndị Ozizi Ụgha
Bible na-ekweta na ọbụna mgbe mmadụ mụtasịrị eziokwu Bible, o nwere ihe ize ndụ nke ịbụ onye e ji ozizi ụgha merụọ n’ụzọ ime mmụọ. Pọl onyeozi dọrọ aka ná ntị, sị: “Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara iwere ịhụ amamihe n’anya na aghụghọ efu nke ya bụrụ onye na-ezu unu n’ohi, ịhụ amamihe n’anya nke dị ka ihe ozizi mmadụ nyere idebe, dị ka ozizi mbụ nke ụwa, ma ọ dịghị ka Kraịst si dị.” (Ndị Kọlọsi 2:8) Lee onyinyo mara mma akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ese! Dị ka anụ ọhịa ndị chọrọ iburu gị rie, ndị ozizi ụgha pụrụ ịdị ize ndụ n’ezie.
N’eziokwu, Pọl rịbara ihe ndị ọzọ kweere ama. N’otu oge, ọ malitere okwu site n’ịsị: “Ndị ikom nke Atens, n’ihe nile ahụwo m na unu na-asọpụrụ ndị mmụọ unu nke ukwuu. N’ihi na mgbe m na-agabiga, na-ekirikwa ihe dị iche iche unu na-asọpụrụ, m wee hụ otu ebe ịchụàjà nke e dekwasịrị ihe a n’elu ya, E nyere chi nke a na-amaghị ama.” (Ọrụ 17:22, 23) Otú ọ dị, Pọl etinyeghị uche ya mgbe nile na nkà ihe ọmụma nke ndị nkụzi Gris.
Ọ bụ otu ihe bụ́ ịmara banyere mmalite na nkwenkwe nke okpukpe ụgha, bụrụ nnọọ ihe ọzọ bụ́ itinye uche na ya. * Jehova ahọpụtawo “ohu ahụ kwesịrị ka a tụkwasị ya obi, nke nwekwara uche” ịkụzi ihe dabeere n’Okwu ya. (Matiu 4:4; 24:45) Pọl n’onwe ya dere, sị: “Unu apụghị iketa tebụl Onyenwe anyị na tebụl ndị mmụọ ọjọọ. Ma ọ bụ ànyị na-akpasu Onyenwe anyị ekworo?”—1 Ndị Kọrint 10:20-22.
Ụfọdụ ndị ozizi ụgha pụrụ ịbụwo ezi ndị Kraịst na mbụ, ma n’otu oge, ha ahapụ eziokwu ma hie ụzọ. (Jud 4, 11) Nke a ekwesịghị iju anyị anya. Mgbe Jisọs kwusịrị banyere “ohu ahụ kwesịrị ka a tụkwasị ya obi, nke nwekwara uche” bụ́ nke na-anọchite anya ìgwè nke ndị Kraịst e tere mmanụ, o kwuru banyere “ohu ọjọọ ahụ,” bụ́ òtù nke na-eme mkpesa, sị, “Onyenwe m na-anọ ọdụ dị anya,” ma malite iti ndị ohu ibe ya aka. (Matiu 24:48, 49) Mgbe mgbe, mmadụ ndị a na ndị na-eso ụzọ ha adịghị enwe ozizi doro anya ha na-ezi; nanị ihe na-amasị ha bụ imebi okwukwe nke ndị ọzọ. Jọn onyeozi dere banyere ha, sị: “Ọ bụrụ na onye ọ bụla abịakwute unu, ma o wetaghị ozizi a, unu akpọbatala ya n’ụlọ, unu asịkwala ya biri nke ọma.”—2 Jọn 10; 2 Ndị Kọrint 11:3, 4, 13-15.
Ndị nwere ezi obi bụ́ ndị na-achọ eziokwu ahụ na-eme nke ọma iji nlezianya nyochaa ihe ha na-anụ site n’okpukpe dị iche iche. Ka oge na-aga, Chineke ga-agọzi ndị nwere obi eziokwu bụ́ ndị na-achọ eziokwu ahụ. Bible na-ekwu banyere amamihe Chineke, sị: “Ọ bụrụ na ị chọọ ya dị ka ọlaọcha, ọ bụrụkwa na ọ bụ dị ka akụ̀ zoro ezo ka ị na-egwupụta ya: mgbe ahụ . . . ihe ọmụma Chineke ka ị ga-achọta.” (Ilu 2:4, 5) Mgbe ezi ndị Kraịst nwetara ihe ọmụma Chineke a site na Bible na ọgbakọ ndị Kraịst ma hụ otú Jehova si agọzi ndị ihe ọmụma ahụ na-eduzi, ha adịghị anọgide na-ege ntị n’ozizi nke okpukpe ụgha.—2 Timoti 3:14.
^ par. 10 Akwụkwọ bụ́ Mankind’s Search for God, nke Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., bipụtara, na-enye ihe ọmụma bụ́ isi banyere mmalite na ozizi nke ọtụtụ n’ime okpukpe ndị dị n’ụwa.